खाडी देश र मलेसियाले कहिलेबाट मगाउलान् नयाँ श्रमिक ? – MEDIA DARPAN
खाडी देश र मलेसियाले कहिलेबाट मगाउलान् नयाँ श्रमिक ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ११ आश्विन २०७७, आईतवार ११:५६
११ असोज, काठमाडौं । सरकारले गत भदौ १७ गतेबाट नयाँ श्रम स्वीकृति खुलायो । तर, नयाँ प्रक्रियामार्फत म्यानपावर कम्पनीहरुबाट विदेशी कम्पनीमा श्रमिक लैजाने गरी नयाँ संस्थागत श्रम स्वीकृति लिने क्रम अझै सुरु भएको छैन ।
दाहालका अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरुले नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेगरी विभागमा कागजात ल्याएका छैनन् । मुख्य श्रम गन्तब्य मुलुकले नयाँ श्रमिक लैजाने प्रक्रिया खुला नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको दाहाल बताउँछन् ।
यसअघि नै विदेश गएर सोही कम्पनीमा फर्किने पुनः श्रम स्वकृति भने जारी भइरहेको छ । त्यसरी फर्किने कामदारको संख्या पनि ठुलो छैन ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर छट्पटाइरहेका नेपाली युवाको जिज्ञासा छ- कहिलेबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइएला ? दशैंपछि काम गर्न विदेश जान पाउनेमा धेरै युवा आशावादी छन् ।
सरकारले नियमित उडान खोलेको छ । मलेसिया र खाडीका देशमा महामारी नियन्त्रणउन्मुख भएकाले अब म्यानपावरमार्फत विदेश जान सहज बन्छ भन्ने अपेक्षा युवामा छ ।
नेपालीका मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरु कोभिड-१९ को महामारीसँग जुधिरहेका छन् । विकासशील अर्थतन्त्र भएको खाडी मुलुकमा कोरोनाले नराम्रो असर पारेपनि अब त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ ।
व्यवसायीहरु श्रम गन्तव्य मुलुकहरुका नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु हुनासाथ वैदेशिक रोजगारीको चलहपहल सुरु हुने बताउँछन् । विदेशबाट कामदार आपूर्तिबारे सोधपुछ हुन थालेकोले दशैंपछि विदेश जान सहज अवस्था बन्ने उनीहरुको भनाइ छ
कतिपय देशका सरकार तत्काल विदेशी कामदार नलिने नीतिमा छन् । यो कारण अहिलेलाई ठूलो संख्यामा कामदारको माग आउने सम्भावना कम रहेको दूतावासका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाली दूतावास र नियोगमा नयाँ कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु हुन पनि समय लाग्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
साउदीमा पनि बिस्तारै महामारी नियन्त्रण उन्मुख छ । त्यहाँ पनि बिस्तारै उद्योग, व्यवसाय, परियोजनाहरूमा कामदार आवश्यक पर्छ नै । त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने पुरी बताउँछन् ।
अन्यत्रजस्तै कतारमा पनि तत्कालै ठूलो संख्यामा कामदारको माग हुने अवस्था छैन । कतारले काम गुमाएर बसेका विदेशी श्रमिकलाई उद्योग, कलकारखाना र परियोजनाहरूमा लगाउन थालेको छ ।
कतारलाई तत्कालै पहिलेजस्तै श्रम गन्तव्य बनाउन गाह्रो भएपनि सम्भावनाहरु देखिएको दोहास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाज विस्तारै कतारको रोजगार पुर्नस्पित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
नेपालीहरूले राम्रो कमाइ गर्ने गन्तव्यका रूपमा रहेको यूएईमा भने तत्कालै नेपाली श्रमिक जान पाउने सम्भवना कम छ । त्यहाँ अहिले पनि धेरै कम्पनी आर्थिक संकटमा फसेका छन् ।
त्यहाँको सरकारले लिने आर्थिक नीतिबाट नेपाली श्रमिकको अवसर निर्धारण हुने अवस्था छ । त्यहाँ नयाँ कामदार भिसा दिन थालिएको छैन ।
‘कोभिड-१९ पछि यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा जनशक्ति चाहिन्छ नै,’ भण्डारी भन्छन्, ‘कुवेतमा श्रमिकको माग पुरानै दरमा फर्किन चाही समय लाग्ने देखिन्छन् ।’
कुवेतमा घरेलु महिला श्रमिकहरु बढी जाने गरेका छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरू कुवेतमा कार्यरत छन् ।
होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका क्षेत्रबाट माग नआए पनि अन्य औद्योगिक क्षेत्रबाट आउन थालेको म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
रिभर ओभरसिजका प्रवन्ध निर्देशक रघु पुरी खाडीका कतिपय देशले रोजगारी नखुलाएपनि त्यहाँका कम्पनीहरुले इमेल र फोनमार्फत आफ्नो आवश्यकता बताउन थालेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार मलेसिया र खाडीका ठूला परियोजनामा बढी असर देखिएको छ । ठूलो लगानीका रिफाइनरी लगायत परियोजनाहरू कोभिड-१९का कारण पछि धकेलिएकाले त्यस्ता क्षेत्रबाट भविष्यमा आउने माग केही घट्ने देखिएको छ ।
अहिले विदेशबाट सुरक्षा र सरसफाइको क्षेत्रमा माग धेरै आउने देखिएको पुरी बताउँछन् । ७२ घण्टाभित्र गरेको पीसीआर रिपोर्टको आधारमा श्रमिक आउन पाउनेगरी विदेशमा प्रोटोकल बनिरहेकाले पनि धेरै समस्या नपर्ने उनको बुझाइ छ ।
कलेजो प्रत्यारोपण सर्भसुलभ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव